musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » India Kupwanya Nhau » IATO Anotarisana Akatarisana neHurumende yeIndia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • nhau • Kuvakazve • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Akasiyana Nhau
IATO reps anosangana neMinistry Gurukota
Nhasi, VaRajiv Mehra, Mutungamiri, naVaPronab Sarkar, Pakarepo Mutungamiriri wePashure, weIndia Association yeVashanyi Vanoshanda (IATO), iyo nyika yepamusoro yeboka revashanyi, vakadaidzira Hon. Gurukota rezvemari, Mai Nirmala Sitharaman, muhofisi yavo.
Vamiriri veIATO vakasangana kuzomutenda nekuchenesa Service Export kubva kuIndia Scheme (SEIS) kune vanopa rubatsiro.
Pamusoro pezvo, vakamutenda nemahara e5-eVashanyi emahara evashanyi vekunze, uye nekupa zvikwereti uye kutsvaga rutsigiro kubva kuhurumende kumutsidzira kwekushanya uye kugadzirisa nyaya dzakamirira.
Izvi zvichabatsira zvakanyanya vashanyi vekuIndia kukwikwidza nenyika dzakavakidzana kuti vakwezve vashanyi vazhinji kuIndia.
Idzo nyaya dzakasimudzwa naiye Hon. Gurukota raifanira kuchengetedza zvikamu zveSEIS Zvidimbu zve7 muzana izvo zvakapihwa vashanyi vekushanya kwemakore mashoma apfuura. Vakataura kuti IATO yanga ichikumbira kuwedzera iyo muzana kusvika gumi muzana, uye inofanirwa kuchengetwa kusvika muzana muzana kana isingakwanise kuwedzerwa. Ivo zvakare vakati hapafanire kuve necaps, uye SEIS kune vanoshanya vanofanirwa kuburitswa pasina kubvumirana pane iyo muzana.
Vakakurukurawo naiye Hon. Gurukota kukanzura kweGoods and Services Mutero (GST) kune vashanyi vekushanya uye ndokumbira kuti vabvise kusanzwisisika uku nekuchaja GST pamutengo unofungidzirwa unogona kunge uri gumi muzana yemitero mizhinji yevashanyi vanoshanya. Izvi zvinobvumidza sevhisi kubhadhariswa mutero pa10 muzana pa18 muzana mucherechedzo-kumusoro, zvinoreva kuti mwero unoshanda weGST pamutengo wepakeji wese uchashanda kusvika ku10 muzana yemitero mizhinji yemushanyi kune mutengi wake asina Input. Mutero Kiredhiti (ITC). Izvo zvakakumbirwazve kuti GST uye Yakabatanidzwa Midziyo neMasevhisi Mutero (IGST) varegererwe zvizere pamasevhisi anopiwa kunze kweIndia, kureva, munyika dzakavakidzana kunyangwe hazvo pasuru yacho ichisanganisira India kushanya, sezvo izvi zvichikonzera kurasikirwa kwebhizinesi kune vashanyi vanoshanya. Nekuda kwekuregererwa mutero, marejista anouya kuIndia vashanyi vekushanya panzvimbo pekuti mabhuketi aya aende kune vanoshanda vanoshanya vari munyika dziri pedyo. Izvi zvichawedzera shanduko yekunze kune dzimwe nyika.
Imwe nyaya yakatorwa ndeyomutero weKutora Kuunganidzwa kuSource (TCS) pakutengesa mapakeji ekushanya kune dzimwe nyika Izvo zvakakumbirwa kuti TCS haifanire kuitwa kuti ishandiswe kune vanhu kana makambani asiri vagari vekunze vagari, vashanyi, kana vekunze vashanyi vashanyi vari kunze kweIndia yekutenga mapakeji ekushanya kuburikidza Indian mushanyi mushanyi kwekunze kweIndia.